आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल असार १ गते शुक्रबार::Nepal's No.1 Genuine Online News Portal
प्रकाशित मिति - शुक्रबार, असार १, २०७५
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल असार १ गते शुक्रबार इश्वी सन् २०१८ जुन १५ तारीख ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथी चन्द्रमा मिथुन राशिमा सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋर्तु चन्द्रोदय आषाढसंक्रान्ति महाराज छत्रशाल जन्मजयन्ति कृष्णप्रणामी – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
पुरानामित्रहरुको भेटघाटमा सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । कार्यसम्पादनमा भएको त्रुटिको अपसज आईपर्नेछ । बिश्वासनिय ब्यक्तिहरु बाट धोका हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । प्रतिद्वन्धिहरु सबल रहलान ।
संचित रकम खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानको खराबिले स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न गराउन सक्नेछ । सामान्य कार्यसम्पादनमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने सम्भाबना रहेकोछ । सामान्य स्थानतरणको सम्भाबना रहेकोछ ।
ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । नयाँकार्यको थालनिको योग रहेकोछ । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ । चिसो सम्बन्धी समस्याका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । प्रतिस्प्रधामा उत्रन तपाईकोे समय ले त्यति साथ दिने छैन । शारिरीक आलस्ताले सताउन सक्छ । मान्यजनको साथसहयोग प्राप्त हुनेछ । सामान्य आर्थिक अभाबको सामन गर्नु पर्ला ।
आम्दानिका बिभिन्न स्रोतहरु फेला पर्नेछन । ब्यापार ब्यवसायमा समय राम्रो रहेको छ । नयाँ कार्य क्षेत्रका लागी लगानि गर्ने समय रहेको छ । मित्रजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ । सामान्य स्वास्थ सम्बन्धि समस्या रहला
मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आफन्त जन बिच भेटघाट हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । पराक्रममा बृद्धि हुनेछ ।
सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । यात्रामा सामान्य कठिनाई आईपर्न सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा मित्रजनले प्राप्त गर्नेछन् । सहि निर्णय गर्न नसक्नाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला ।
सन्तान शुःख प्राप्त हुनेछ । सामान्य चोटपटक सहनु पर्ला । नयाँ कामको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । बौधिक क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गर्ने छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा कमि आउनेछ ।
मान्यजनको साथ छुट्नाले सामान्य चिन्ता सहनु पर्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आम्दानि हुने योग रहेको छ । कामको क्षेत्रमा समान्य ढिलाई रहन सक्छ । खानपानको क्षेत्रमा सजग रहनु होला ।
आज राति दुई बजेदेखि अधिकमास समाप्त, यस्तो हो अधिकमास